Madaxda ugu sareysa maamulka Puntland oo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha Wakiilada maamulkaas. – Radio Muqdisho
Madaxda ugu sareysa maamulka Puntland oo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha Wakiilada maamulkaas.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta kulan la qaatay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Puntland ee maanta la doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu hambalyeeyay guddoomiyaha susub, waxa uuna illaahay uga baryey in uu u fududeeyo xilka loo igmaday.
Sidoo kale Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo isna qaabilay Guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Puntland, ayaa ugu hambalyeeyay xilka loo doortay, waxa uuna xusuusiyay wajibaadka shaqo ee horyaala gudoomiyaha cusub.